5 yekushongedza mazano nematanda epopsicle: nyore, asingadhuri uye anobatsira | Mhizha On
5 yekushongedza mazano nematanda epopsicle: nyore, zvakachipa uye zvinobatsira
Irene Gil | | Decoration, Crafts
Mune izvi Tutorial ndinokuunzira 5 mazano ari nyore uye asingadhuri kugadzira zvinhu ne popsicle zvimiti. Iwe unogona kugadzira masherufu, mhete nemurongi wavo, mini mabhokisi emichero kana kunyangwe maratidziro. Ivo vane mikana yakawanda uye iwe unogona kuigadzira ivo kune ako madiro.
2.3 Mini michero bhokisi
2.5 Earring murongi
ari main zvinhu izvo zvauchazoda mune angangoita aya mazano achave:
Ice cream inonamira
Vanogona kusiyana zvishoma zvichienderana nechinhu chaunoda kugadzira uye nemabatiro aunozviita iwe. Semuenzaniso, kana iwe uchida kumaka template iwe unozoda a stencil pateni y pfapfaidzo pendi, sezvauchaona mune trivet dzidzo, uye kune mhete iwe unozoda iyo mhete waya y masking tepi kugadzira dhizaini yekupenda.
In inotevera vhidhiyo-dzidziso Unogona kuona maitiro ekugadzira yega yeiyo 5 yekushongedza mazano nemapopsiki matanda. Uchaona kuti ndizvo nyore y kutsanya yekuita. Uye usakanganwa bvuma zvedu YouTube channel kuitira kuti usarasikirwa nechero chedzidziso dzatinoburitsa.
Tichaongorora imwe neimwe yemazano kuitira kuti iwe usakanganwa chero nhanho uye iwe unogona zviitire iwe nyore
Joinha tsvimbo nhanhatu kumagumo nekuinama neiyo pfuti silicone uye kugadzira iyo hexagon. Kubva pamutsara wekutanga, namatira zvakanyanya pairi kusvikira iwe uine yakawanda yakanaka yematanho yasara, yakakwana kuti ukwanise kuisa zvinhu zvako zvekushongedza pairi. Penda iyo ne acrylic pendi, kunyangwe iwe uchigonawo kuzviita na pfapfaidzo pendi, uye kana yaoma iwe unenge uine shefu rakagadzirira kuturika.
Unofanira kuisa tsvimbo sere padivi peumwe, wozvibatanidza pazasi nedzimwe tsvimbo nhatu nenzira yakatarisana. Kushongedza trivet, isa a stencil template pamusoro uye shandisa pfapfaidzo pendi. Bvisa template uye iwe uchave newakaiswa mucherechedzo. Iwe unogona ikozvino kushandisa yako trivet kuisa iyo kofi inogadzira, sosi, hari ...
Mini michero bhokisi
Isa zvigunwe zvishoma pamazino sendimita imwe inenge yakatenderera. Iwe unofanirwa kunamatira meno emazino kumativi ese, saka namatira mira mushonga wemazino mune imwe neimwe yemagumo, aya ndiwo achange akabata mativi. Enda nekucheka mativi akapoteredzwa kuitira kuti bhokisi rive rakaenzana. Nenzira iyi unogona kuchengeta kiwis, tangerines kana chero michero midiki mu Kushongedza y kusika.
Cheka magumo ezino rezino, kana kuita iwo chimiro chaunoda. Uine awl kuboora mudonzvo wepopsiki uye gadzira gomba gomba kuenda kuburikidza neiyo mhete iyo inozosungirwa kune iyo mhete chimiro. Vapende nenzira yaunovada nayo acrylic pendi. Mune ino kesi iwe unogona kugadzira zvikamu nekunamatira masking tepi kupenda mitsara yakatwasuka. Uye saka une mamwe mhete tsika uye chaizvo zvehupfumi.
Gadzira maviri makona matatu, imwe neimwe ine zvimiti zvitatu, wozvigadzirisa nesilicone. Zviise padivi nepadivi uye unama magumo eimwe tsvimbo pavari, uchisiya katatu padivi rega. Namatira akawanda sezvaunoda pane rimwe kana mativi ese. Penda iyo ne acrylic pendi kana ne mwaya ruvara rwaunofarira zvakanyanya, uye kana rwaoma unenge uine nzvimbo yekushongedza kupi kwekusiya yako earrings.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » 5 yekushongedza mazano nematanda epopsicle: nyore, zvakachipa uye zvinobatsira
Mirtha. M Suarez akadaro
GURU ,, ndakarida, kusvikira nhasi ndakanga ndisina kukwanisa kunakidzwa nezvose zvamakaburitsa pano.
Mwari vagare vainewe uye vachiramba vachikuchengeta kuitira kuti utifadze nemafungiro ako.
Pindura kuna Mirtha. M Suarez
Irene Gil akadaro
Ndatenda kwazvo Mirtha 🙂
Pindura Irene Gil
Isu tinofungidzira Singer 1507 yekusonera muchina
Nzira yekugadzira furemu yephotocall